ပြည်ပ ကစားသမား ခေါ်ယူခွင့် (၄+၁) စနစ် ပြန်လည် ကျင့်သုံးရန် အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို မြန်မာနို? - Yangon Media Group
အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌများအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ပကစားသမားခေါ်ယူခွင့် (၄+၁)စနစ်ပြင်ဆင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ အဆို ပြုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲစတင်ခဲ့သည့် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် ပြည်ပကစားသမားခေါ်ယူခွင့်ကို ငါးဦးအထိ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး နောက် လေးဦးအထိပြန်လည်လျှော့ချခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်ပကစားသမားသုံးဦးနှင့် အာရှသားတစ်ဦး ခေါ်ယူခွင့်စည်းမျဉ်း (၃+၁)စနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ပြီး ခေါ်ယူထားသည့် နိုင်ငံခြားသားကစားသမားလေးဦးစလုံး ပွဲထွက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် (၃+၁)စနစ်ကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးခဲ့သော်လည်း ပွဲထွက်ခွင့်ကို နိုင်ငံခြားသား ကစားသမားသုံးဦးသာ ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အာဆီယံဇုန်ဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌများအစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌက အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများတွင် ယခုထက်ပို၍ ငွေကြေးဘတ်ဂျက်ပိုမိုသုံးစွဲသင့်ပါကြောင်း၊ ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ စည်းမျဉ်းဖြစ်သည့် (၄+၁)စနစ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါကြောင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ကစားသမားများအနေဖြင့် အာရှကလပ်အသင်းများတွင် ပါဝင်ကစားခွင့်ရရေးအတွက် နည်းလမ်းများဖွင့်ပေးထားသင့်ပါကြောင်း၊ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများကို ပိုမိုဦးစားပေး ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း အဆိုပြုတိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ထိုင်းဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (FAT)က ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ စည်းမျဉ်းတွင် အာဆီယံကစားသမားတစ်ဦး မဖြစ်မနေခေါ်ယူရမည့် စည်းမျဉ်းအသစ်ကြောင့် မြန်မာကစားသမားများဖြစ်သည့် အောင်သူ၊ ကျော်ကိုကို၊ နန္ဒလင်းကျော်ချစ်၊ ကောင်းဆက်နိုင်၊ ကျော်ဖြိုးဝေ၊ ဝင်းလှိုင်ဦး၊ အောင်ကျော်နိုင်တို့ ထိုင်းလိဂ် အသီးသီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ ကစားနိုင်ခဲ့သည်။
ဟောင်ကောင် ဖိတ်ခေါ်ဖလား ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ယူ-၁၅ အသင်း လူစာရင်း ထုတ်??
ပူတင်၏ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်မှု အပေါ် ထရန့်က ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောကြားမှု ဂျွန်မက်ကိန်း ပြ?